मोटाएका प्र,हरीलाई जिल्ला झिकाएर दैनिक यस्तो व्यायाम शुरु - Babal Khabar
मोटाएका प्र,हरीलाई जिल्ला झिकाएर दैनिक यस्तो व्यायाम शुरु
August 2, 2021 by Editor
जिल्ला प्र,हरी कार्यालय दाङले शारीरिक रूपमा मोटा देखिने प्र,हरी जवानदेखि सबैलाई दैनिक दौडाउन सुरू गरेको छ।
नयाँ प्र,हरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्ले जिल्लामा आएको दोस्रो दिनदेखि नै त्यस्तो अभियान सुरू भएको हो।
‘म दाङ आएको भोलिपल्टदेखि नै बिहान दैनिक रूपमा सबैलाई दौडाउन थालेको छु,’ एसपी काफ्लेले भने, ‘बिहान म पनि सधैँ दौडिन्छु र मोटा प्र,हरी सबैलाई अनिवार्य दौडाउन लैजान्छु।’
जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा कार्यरत मोटा प्र,हरीलाई जिल्ला झिकाएर दैनिक दौडाएर फिट भएपछि पुनः सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमै खटाइने एसपी काफ्लेले बताए।
‘हाम्रोमा जागिर खाने कोही त यति मोटाएका छन् कि राम्रोसँग हिँड्नपनि सक्दैनन्,’ एसपी काफ्लले भने, ‘जो आँफै राम्रोसँग हिड्न सक्दैनन्,उनीहरुलाई दौडाएर, पिटी खेलाएर फिट पार्ने मेरो योजना हो।’
दाङ सरूवा भएर आएको दोस्रो दिनदेखि एसपी दौडिन थालेपछि डिएसपीलगायत सबै शारीरिक रूपमा ‘अनफिट’ प्र,हरीहरू दौडिन र व्यायाम गर्न थालेका छन्।
डिएसपी मुकुन्दप्रसाद रिजालले डिउटीमा रहेका प्र,हरी बाहेक अरू सबै एक घन्टा दौडिन सुरू गरेको बताए ।
‘शारीरिक रुपमा फिट हुन सबै दौडिने भन्ने छ,’ रिजालले भने ‘केही दिन केही गाह्रो भए पनि हिजोआज एक/आधा घन्टा दौडिएर पिटी गर्दा आनन्द आउँ
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार मा-सुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त हुने प्रोटिन मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ । मा-सुबाट प्राप्त हुने प्रोटिनले मुटु रोगको ख-तरा बढाउछ ।
जाे मानिस मा-सुजन्य प्रोटिन बढी उपभोग गर्छन् उनीहरूलाई मुटुरोगको ख-तरा ६० प्रतिशतसम्म बढेको पाइयो भने जाे ड्राइ फ्रुट्सजन्य प्रोटिन बढी सेवन गर्छन्, उनिहरुमा याे समस्या ४० प्रतिशतभन्दा कम देखियो । ड्राइ फ्रुट्सबाट मुटुलाई स्वस्थ राख्ने कस्ता तत्व पाइन्छन् त, जुन यश प्रकार छन्:-
१) ओखर:- ओखरमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन, जिंक, भिटामिन ई, भिटामिन ए, फोलेट तथा फोस्फोरस हुन्छ । यसले रगतको कोलेस्ट्रोल कम गरेर मुटुरोग हुनबाट जोगाउँछ । यसमा विद्यमान जिंकले इन्फेक्सन तथा भिटामिन ईले क्यान्सरबाट बचाउँछ । यसले मस्तिष्कको क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्छ भने यसको नियमित सेवनका कारण मानिस गोरो हुँदै जान्छ ।
२) देशी बदाम:- यसमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन तथा फाइबर पाइनुका साथै क्याल्सियम, एन्टीअक्सिडेन्ट तथा भिटामिन ई समेत पाइन्छ । यसको सेवनले दाँत एवं ह-ड्डी बलियो हुन्छ । फाइबर हुने भएकाले यो बदाम मुटुका लागि समेत राम्रो मानिन्छ ।
३) अन्जीर:- अन्जिरमा प्रोटिनका साथै पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम एवं भिटामिन ए र बी पाइन्छ । यसको सेवनले कब्जियत, एनि-मिया, दम, सर्दी, कम्मरको तथा टाउकाको दु-खाइ, थाइराइड तथा पाइल्सजस्ता रोगमा लाभ गर्छ । यसको सेवनले शरीरमा तागत दिन्छ ।
४) काजु:- काजुलाई ड्राइ फ्रुट्सको राजा मानिन्छ । आधा मुठी काजुमा ३७४ ग्राम क्यालोरी, ३१ ग्राम चिल्लो, १६ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, १० ग्राम प्रोटिनका साथै पर्याप्त मात्रामा भिटामिन के तथा भिटामिन बी ६ पाइन्छ । यसबाट क्याल्सियम, आइरन, फोलेट तथा जिंक पनि पर्याप्त पाइन्छ ।
५) किसमिस:- दा-ख वा किसमिसको सेवनले रक्त निर्माणमा वृद्धि हुन्छ । यसको नियमित सेवनले वायु, पित्त तथा कफसम्बन्धी तीनै दो-षको निवारण गर्छ । यो मुटुका लागि पनि लाभदायक छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा आइरन पाइन्छ । एक कप किसमिसमा ५ देखि ६ ग्रामसम्म प्रोटिन हुन्छ ।
६) पेस्ता:- पेस्ता स्वास्थ्यका लागि अति उत्तम खाद्यवस्तु मानिन्छ । यसमा प्रोटिनका साथै म्याग्नेसियम, कपर, फोस्फोरस, भिटामिन बी तथा अत्यधिक फाइबर हुन्छ । यसको सेवनले कोलेस्ट्रोल तथा हार्ट अट्याकबाट बचाउँछ ।
७) बदाम:- १०० ग्राम बदामबाट १ लिटर दूधमा पाइने बराबरकै प्रोटिन पाइन्छ । यसमा प्रोटिनको मात्रा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । बदामले पाचन शक्ति बढाउन समेत मद्दत गर्छ ।
by : Viral khabar
Prevयस्तो छ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल,मुल्य सुन्दा सात्तो जाने हेर्नुहोस् कति पर्छ?
nextप्रेमीले दिएको नेकलेस भित्र त्यस्तो के थियो त्यस्तो ? जुन दुई बर्ष प्रेमिकाले लगाइन्, जब नेकलेस टुट्यो, खुशीले चिच्याइन्